टाउको दुख्ने समस्या र यसको उपचार
मंगलवार, अक्टोबर 26, 2021
सेप्टेम्बर 11, 2018 डिसेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक9Comments डा. राम बहादुर बोहरा
कहिलेकाहीँ तनावले टाउको दुख्नु सामान्य नै हो । तर, टाउको दुख्ने समस्यालाई सधैँ सामान्य ठानेर बस्दा यसले पछि जटिल समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । सामान्य रूपको टाउको दुखाइको समय परिवर्तन हुँदै गयो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । जस्तै, बिहान मात्र दुख्ने टाउको बेलुका पनि दुख्न थाल्यो, कम दुख्ने टाउको बढी दुख्न थाल्यो भने सावधानी अपनाउनुपर्छ । निरन्तर टाउको दुख्ने समस्या छ भने पछि गएर ब्रेनमा पानी जम्ने, ट्युमर पलाउने, रगत जम्ने सम्भावना उमेरअनुसार बढ्दै जान्छ ।
आजकल व्यस्तताको कारण सामान्य टाउको दुख्ने वित्तिकै Ibuprofen टेब्ले खाने चलन छ यस्ले कहिले काही नकरात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले टाउको दुख्नासाथ आँखा चेक गराई सक्नु पर्छ । टाउकोमा जुकाको फुलहरू चड्नाले पनि टाउको दुख्न सक्छ । सम्बन्धित विषयको डाक्टरको परामर्शमा उपचार गराउन सके यो रोग निको बनाउन सहज हुनेछ । बढी टाउको दुखेको छ यदि पिनासको कारणले टाउको दुखेको भएमा निम्न उपचार गर्न सक्नुहुन्छ ।
१. शिर शुलादि बज्र रस १-२ गोली दिनमा २ पटक खान दिने यो रोग निको हुन्छ ।
२. पिनास नास नेजल ड्रोप जुन साइडको टाउको दुखेको छ त्यसमा राख्ने ठिक हुन्छ ।
३. मानसिक टेंसनको कारण टाउको दुखेको भएमा Avena Sativa Q १५ थोपा दिनमा २ पटक पानीमा राखेर खान दिनुस निको हुन्छ ।
← डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो ?
किन लगाइन्छ बिजुलीको झट्का ? →
घरमै दन्त मन्जन बनाउने सरल तरिका
जनवरी 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
जाडोमा खोकीको औषधिको रुपमा अदुवाको प्रयोग
जनवरी 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
स्वास्थ्यको लागि आँप खानुका फाइदाहरु
फ्रेवुअरी 11, 2019 फ्रेवुअरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक 8
9 thoughts on “टाउको दुख्ने समस्या र यसको उपचार”
Pingback: कान कराउनुको कारण के हो ?
Pingback: जान्नुहोस् ! पिनासको कारणहरू र लक्षणहरू
Pingback: जान्नुहोस् ! पिनासको कारणहरू, लक्षणहरू र निदान विधि
Pingback: जान्नुहोस् ! नसा च्यापिने समस्याको कारण, लक्षण र उपचार
Pingback: जान्नुहोस् ! नसा च्यापिने समस्यामा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरू
Pingback: आधा टाउको दुख्ने समस्या र यसको समाधान
Pingback: टाउको दुखाईबाट पत्ता लाग्न सक्ने रोगहरू
Pingback: टाउको दुख्नुको कारणहरु तथा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु, जानी राखौ
Pingback: यस्ता छन् टाउको दुख्ने कारणहरु, जानी राखौ
औषधीको रुपमा निमको बोक्रा र पातको प्रयोग
उल्टी (Vomiting) र यसको उपचार
साउन महिनामा मेहेन्दी लगाउनुको वैज्ञानिक कारण के ?
कन्डम फुटेर वीर्य योनिभित्र झरे के हुन्छ ?
अनिद्राको रामबाण औषधी ओखर खानुका फाइदाहरु